Tichapedzerana neBurkina Faso: Mpandare | Kwayedza
20 Jan, 2021 - 11:01 2021-01-20T11:53:44+00:00 2021-01-20T11:52:47+00:00 0 Views
MANEJA wechikwata chenyika chemaWarriors – Wellington Mpandare – anoti vari kutarisira kuti vachatamba nhabvu yepamusoro apo vari kusangana neBurkina Faso nhasi mumutambo wavo wechipiri wemuGroup A Africa Nations Championship (CHAN) kuCameroon.
Mutambo wekutanga wemaWarriors wakatambwa nemusi weMugovera wadarika apo vakakundwa 1-0 neCameroon.
Mpandare anoti kupedza nguva refu vatambi vasingatambe nhabvu uye kuvhiringidzwa kwavakazoitwa neCovid-19 kwakakonzera kuti chikwata chavo chisatambe zvakanaka.
“Zvange zvisiri nyore kwatiri nekuti nhabvu munyika haisi kutambwa kwegore rose uye kuzoti iyo Covid-19 yakativhiringidza zvikuru gadziriro dzedu dzeCHAN.
“Chimwezve, mutambo wekutanga wagara unonetsa muchitamba nechikwata chinenge chiri pamusha pacho. Asi tinotarisira kusvika kure,” anodaro Mpandare.
Anoenderera mberi achiti,”Tinotarisira kuti tichatamba zvakasiyana patiri kusangana neBurkina Faso. Yakati simbei kudarika Cameroon zvayo.”
465 000 vasungwa26 Feb, 2021
Chirwere chichiriko’26 Feb, 2021
Musayambuke nzizi dzakazara: ZRP26 Feb, 2021
465 000 vasungwa
Musayambuke nzizi dzakazara: ZRP
Otsvaga rubatsiro rwekuvhiiwa
‘Vanotengesa muviri vanoda kudzivirirwa’
Covid ingangotivhiringa: Mpandare
Takamirira kupera kweCovid-19: ZSA
‘Zifa ngaibude pachena’
Tave kutyira vechidiki: Mafero
Jekiseni ratipa tariro – ZNCC
Ropa rave shoma: NBSZ